"Qeylada" ka dhalatay hambalyada Mareykanka ee Qoorqoor - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Qoor Qoor
Image caption Yamamoto iyo Qoorqoor
Waxaa maalin kahor magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug lagu doortay "madaxweynaha" cusub ee maamulkaas, Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor.
Doorashadaas waxaa hareeyay buuq badan, qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradkana waxay u arkayeen in doorashadaas aysan "noqon karin mid xaq iyo xalaal ah". Waxay ahayd mid ay taageereysay dowladda faderaalka ee Soomaaliya.
Dhanka kale, ururka Ahlu Sunna oo dowladda Federaalka ku eedeeyay inay afduubatay doorashada, ayaa sheegay in Sheekh Shaakir ay u doorteen "madaxweyne".
Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) ayaa isna Magaalada Gaalakacyo ku dhistay "baarlamaan", u doortay "xilka madaxweynaha" Galmudug.
Axmed Cabdi kaariye (Qoorqoor) oo BBC Somali la hadlay ka dib doorashada wuxuu sheegay: "Masuuliyad culus ayaa naloo doortay, oo naloo igmaday. Deegaan iyo dad ay duruufo adag ka jiraan oo xaalado adag ay ka jiraan".
"Waxaa na saaran in duruufahaas ka jira Soomaaliya gaar ahaan Galmudug inaan ku bixino dadaal," ayuu hadalka ku daray.
Falcelinta "hambalyadii" safaaradda Mareykanka
Doorashada Galmudug waxay ahayd mid uu "khilaaf hareeyay" marka la eego sida loogu kala qeybsamay iyo dhinacyada iska soo horjeedo.
"Doorashada ka dhacday Galmudug waxay gundhig u tahay dib u heshisiin siyaasadeed. Dowladda Mareykanka waxay cidwalba ugu baaqeysa inay ka qeybqaadato wadahadalo nabadeed, kuwaas oo si wadajir wax loogaga qabanaya dhibaatooyinka ka taagan gobolkaas," ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho.
"Wa mas'uuliyadda qofwalba saaran in laga hortago khatar walba iyo gacan ka hadal, waxaana u hambalyeeneynaa Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galmudug".
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @US2SOMALIA
— U.S. Embassy Mogadishu, Somalia (@US2SOMALIA) 02 Bisha Labaad 2020
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @US2SOMALIA
Hadalka safaaradda Mareykanka ayaa buuq badan ka abuuray baraha bulshada, waxaana dadka qaar ay ku dhaliileen safiirka sababta keentay in uu taageero doorasho dhinacyada siyaasadda ay ku murmeen.
Dr. Xasan Sheekh oo wax ka dhiga mid ka mid ah Jaamacadaha Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Mareykanka "aanu waligiiba taagerin wax dan u ah Soomaaliya".
"Markii ugu horeysay ee Mareykanka uu Soomaaliya yimid waxay ahayd 1948, xilligaas laga soo billaabo illaa iyo maanta, waligii kama uusan shaqeynin danta ummadda Soomaaliyeed ee wuxuu ka shqeyn jiray danta uu isaga ka leeyahay Soomaaliya. Doorashada Galmudug wuxuu ka dhex arkay dantiisa", ayuu yiri Xassan Sheekh.
Image caption Doorashada Galmudug aya dhalisay khilaaf siyaasadeed
Farriin lagu qoray barta twitter-ka ee madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu sheegay: "Madaxweynaha ayaa u rajeeyay shacabka Galmudug isbeddel miro-dhal ah oo horseeda xasillooni, talo-wadaag iyo horumar ay si wadajir ah ugu tallaabsadaan bulshada iyo dhammaan deegaannada Dowladda Goboleedka Galmudug."
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @TheVillaSomalia
— Villa Somalia (@TheVillaSomalia) 02 Bisha Labaad 2020
In kastoo la dhaliilayay wasaaradda arrimaha Gudaha, Haddana madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in "wasaaradda ay ku amaanan tahay doorkeeda".
"Wasiirka Arrimaha Gudaha, laamaha ammaanka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, Guddiga Doorashada iyo Baarlamanka Galmudug doorka ay ka qaateen miro-dhalka geeddi-socodka hannaanka dimuqraadiyadeed ee Galmudug."
Ka gudub Twitter daabacaad 2 W.Q @TheVillaSomalia
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku ammaanay Wasiirka Arrimaha Gudaha, laamaha ammaanka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, Guddiga Doorashada iyo Baarlamanka Galmudug doorka ay ka qaateen miro-dhalka geeddi-socodka hannaanka dimuqraadiyadeed ee Galmudug.
Dhammaadka Twitter daabacaadda 2 qore @TheVillaSomalia
Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in "tuhun ay markii horeba" ka qabeen Mareykanka, balse hadda ay cadaatay.
"(Maxay tahay) Sababta ay beesha caalamka uga aamusantahay ku tumashada madaxda dowladdu ay ku tumanayaan dastuurka, ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, burburinta dowlad-goboleedyada, colaad hurinta beelaha dhexdooda, weerarka mucaaradka, maadaama ay dowladdu ku taagan tahay cududda ciidan ee AMISOM iyo muruqa diblomaasiyadeed ee beesha caalamka.
"Tuhun laga qabay dowladda Maraykanka waa jiray, laakiin tuhunkaas maanta ayuu caddaaday", ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku qoray bartiisa Twitter-ka.
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q Abdirahman Abdishakur Warsame
Soomaalida inteeda badan labo arrimood ayaa isku qaban la’aa. 1- awood sheegashada Dowladda Federaalka ah iyo...
Posted by Abdirahman Abdishakur Warsame on Sunday, 2 February 2020
Dhammaadka Facebook daabacaadda qore Abdirahman Abdishakur Warsame
Sikastaba, Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa qabo in ay tahay "Rajada Shacabka Galmudug Waa Midnimo Iyo Horumar", sida uu ku qoray bartiisa Twitterka.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @SomaliPM
Ra'iisul Wasaare @HassanAKhaire, “Rajada Shacabka Galmudug Waa Midnimo Iyo Horumar”
— SomaliPM (@SomaliPM) 02 Bisha Labaad 2020
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @SomaliPM
Sidoo kale xildhibaan Axmed mcaallin Fiqi oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug ayaa sheegay: "Haddii doorashooyin kala duwan ay ka dhaceen oo madax kala duwan soo saareen, in loo baahan yahay in wixii hadda ka danbeeya in loo hawlgalo sidii loo xallin lahaa kala taagnaanta iyo khilaafka jira."
Image caption Qoor Qoor ayaa loo dortay Madaxweynaha Galmudug
"Uma arko hambalyada safiirada ajnabiga ah sida Yamamato in ay Galmudug ilowsiin karto xanuunka kala qeybsanaanta. Galmudug ma ahan maamul ku dhexyaalla Maraykanka oo aqoonsi uga baahan safiir horey loo sii ogaa mowqifkiisa dhinaca uu u janjeero", ayuu ku Facebook-giisa ku qoray Fiqi.
Balse, Qoorqoor ayaa doonaya in xaalada iyo kala aragti duwanaanta uu u wajoho "wadahadal, isu tanaasul iyo inaan goob walba ugu tagno (dadka diidan), inaan sidaa ku wajahno ayaan rabnaa".
"Kala duwanaanshaha iyo meelaha lagu kala aragti duwan yahay, inaan xallisan karno ayaan kalsooni ku qabaa, inaan isu imaan karno; anigana diyaar baan u ahay inaan goob kasta ugu tago," ayuu hadalka ku daray, isagoo BBC Somali la hadlayay.
Axmed Qoorqoor ayaa wuxuu sheegayaa in Ahlu Sunna iyo Xaaf uu "la hadli doono uuna ka qancin doono waxa ay tabanayaan".
Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri: "Waxaan Alle uga baryay Madaxweynaha cusub ee Galmudug iyo K/Xigeenkiisa in ay ku guuleystaan gudashada waajibaadka culus ee loo igmaday, ayna astaan nabadeed iyo midnimo u noqdaan Galmudug."
Ka gudub Twitter daabacaad 3 W.Q @TheVillaSomalia
Dhammaadka Twitter daabacaadda 3 qore @TheVillaSomalia
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu waqti badan uga baxay in ay qabsoonto doorashadii madaxweynaha Galmudug. Madaxweynaha iyo Ra'iisul wasaaraha ayaa u kala safray halkaas. Balse ugu dambeyn waxaa ka soo baxay natiijooyiin kala duwan iyadoo "seddax dhinac ay sheegayaan in madaxweyne ay kala doorteen".